Namira magnets a - China Ningbo Sine
Namira magnets A Permanent Magnet + namira Tape (Assembly Magnetic) Ningbo Sine Magnetic Company Limited manufactures yakapoteredza, Disc, rectangular & zvimwe customized zvakaumba neodymium magineti uye kusanduka magineti pamwe yepamusoro simba 3M kuzviremekedza -adhesive tepi, kana zvakafanana kaviri madziro namira tepi. Permanent rinobva zvinhu kuti vaifarira kuti yaipiwa pamwe namira matepi: NdFeB magineti N35-N54 mamakisi uye kusanduka magineti. Conventionally, namira matepi vari kureva N danda kana S bez ...
Permanent Magnet + namira Tape (Assembly Magnetic)
Ningbo Sine Magnetic Company Limited manufactures yakapoteredza, Disc, rectangular & zvimwe customized zvakaumba neodymium magineti uye kusanduka magineti pamwe yepamusoro simba 3M kuzviremekedza -adhesive tepi, kana zvakafanana kaviri madziro namira tepi.
Permanent rinobva zvinhu kuti vaifarira kuti yaipiwa pamwe namira matepi: NdFeB magineti N35-N54 mamakisi uye kusanduka magineti. Conventionally, namira matepi vari kureva N danda kana S danda kubva nickel / Zn / Rubber kuifukidza neodymium simbi Boron magnets a kana dzisiri kuifukidza tefa magnets a. Yakanamirwa pamifananidzo inogona kutaurwa ne mutengi.
Namira matepi: China Rare Earth Magnet Limited anopa 3M kuzvida namira matepi uye zvakafanana kaviri madziro namira tepi pamwe ukobvu: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm uye zvichingodaro. Vatengi vanogona kusarudza yakananga 3M tepi womuenzaniso kana ukobvu maererano chaiko kushandisa yakawanda. The mukobvu ari namira tepi iri, kwakasimba ayo adhesiveness achava.
Pari kupfuura inowanzoshandiswa namira matepi zvinosanganisira 3M467, 3M9495LE uye 3M4945.
Application: namira kusanduka magineti kunoratidzwa simba rinonzi magnetic simba uye kusanduka chimiro uye magnetization dzidziso. Saka, zviri zvikuru kushandiswa mune Switch, huchashandiswa uye meter, kushambadza, kushongedzwa, matoyi, mubhizimisi makadhi, bhuku dzorunhare, uye kunogonawo mberi kushandiswa motokari kuvesa, mukuru hotera musuo zvechizarira, zvokurapa uye zvoutano equipments.
Kana namira neodymium zvachose magineti , mupepa simba kwazvo remagineti uye aesthetic chitarisiko. Vazhinji kushandiswa haizoshandisi, zvemagetsi, kana Hardware veimba kushongedzwa, magneto kurapa, shoma kana guru sensors kumba kana muhofisi kuchengeteka gadziriro uye zvichingodaro.
With nheyo yepamusoro, zvikwereti, mutengo zvichemo uye nokukurumidza delivery, isu noushamwari vatengi zvitsva nezvitsaru kuita zvokubvunza.
Next: Magnetic akabatanidzwa pamwechete